galmada lugaha - iftineducation.com
iftineducation.com – galmada cagta – waa kicinta galmada in ay lugaha, inta badan haweenka. cagaha – tani waa qaabka ugu caansan ee galmada cagaha, oo ka kooban in lugaha iyo amaantii faraha badanu waxa suulasha. Taageerayaasha galmada faraha ku faraxsanahay nooca cagta, dhadhan, urin maqaarka, dhaqdhaqaaqa farta ama heerkulka. galmada cagta waxaa inta badan marka la isku daro ku hamiday ah sharabaadada, kabaha iyo sharabaadada.
galmada cagta waa ka rag doonaya ee cagaha dumar ka mid caadi ah. Gabdhaha galmada cagta yar caadi ah oo ku raaxaysan karaan Raalli ahaanshaha qooqaya xitaa cagaha ay.
cagta galmada laga sameeyo
Hannaanka lagu kicin taranka cagaha
Socda lugaha jidhka
waa leefo cagaha
ToeSucking -. Jaqaan iyo leefo cagaha, mararka qaarkood leefo suulasha
Dhuugista – waa riix riixid cagta ah. Dhuugista loo yaqaan ka hor galmada.
dhacdooyinka horseedi muuqaalka kore ee galmada cagta
kasta leexasho, taas oo uu leeyahay sababo ay. Muuqashada galmada cagta waxaa sababi kara:
Dhamaan aragnimada hore waxaa inta badan la xiriira hooyada. Haddii ilmaha waxaa badanaa loo arkaa cagaha u dhashay sameeyey ama cagta, laga yaabaa in ay u muuqanno soo jiitay in galmada cagta.
Xusuusta xanaanada iyo dugsiyada, kuwaas oo xiriir la leh iskula cagihiisa ugu dhashay ciyey ama duugis cagta ayaa waxaa sidoo kale soo jiitay in cagta lugaha dumar .
Haddii wiil ee Idamwarsadeen, dumarka aan la heli karin, oo uu fiirin karaa oo keliya marka ugu qaybta ugu gaari karo ee jidhkooda – lugaha. Cagaha -. Tani waa qaybta ugu qaawan ee jidhka, sidaa wiilasha si xor ah iyada daawan kartaa
galmada cagta ka hor fasalada
galmada cagta waxay u baahan tahay daryeel gaar ah oo aad cagta. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo kiriimyada iyo bad in jilciso maqaarka iyo waxa ay ka dhigi qooraansaneynaa kala duwan. U hubso in laga takhaluso . nidaamsan iyo dar ah lugaha tan jiidasho leh. Haddii nin waxa la leefo iyada suulasha, ka dibna mar walba rinji ciddiyaha maalin ka hor lugta las aad -.
daryeelka cagta si fiican loo soo celin doonaa xiiso leh xitaa ka sii badan intii ay socotay shaqo ee galmada cagta ah.